Indian Visa Chikumbiro | India Visa Chikumbiro | India Visa Online
India Visa yeAmerica
India Visa yeBritish Citizens
India Visa yeCanada Citizens
India Visa yeVakadzi veAustralia
India Visa yeVagari vomuFrance
Dzimwe Nyika »
eVisa Ruzivo rweMusoro
Indian Visa Zvinodiwa
Indian Medical Visa Zvinodiwa
Mvumo yeMapaji Ekupinda
Mapaundi Akabvumidzwa Ekubuda
Vafambi veChikepe Chekufamba
Visa Zvinodiwa nePasipoti
Chiremba Anopinda Visa
Uwane India Visa Online
Chii chinonzi India Visa Chikumbiro
Visa Pa Kusvika
Visa Chikumbiro Maitiro -
Bhizinesi reVisa Vafambi
Mazano ekudzivirira kuramba kweVisa
Visa Mufananidzo Zvinodiwa
Visa Pasipoti Zvinodiwa
Kunyorera kweVisa kubva kuUSA
Indian Visa yeBritish Citizens
Kusvika kuDelhi Airport
Zvimwe Zvinyorwa »
India Tourist Visa Inovhurazve
India Visa Policy Dzidzo
India Online Visa Kudzorerwa
India Vashanyi Kuzvidzivirira
Chinyorwa cheIndia Embasses
Vamiriri vedzimwe nyika muIndia
Visa Policy yeOCI
Visa Policy pavana
COVID-19 Visa Gwara
Select LanguageChirunguFrenchGermanItalianJapaneseSpanishNorwegianDanishDutchSwedishporichaFinnishChiGirikiRussianChinese (Chakarerutswa)ArabicBulgarianCatalanChinese (Traditional)ChiCroatianCzechomuPhilippinesHebrewHindikoreanPortugueseRomanianIndonesianwokuLatviaRituniaChiSebhiyaSlovakSlovenianUkrainianVietnameseAlbanianEstonianGalicianHungaryMalteseThaiTurkishPersianAfrikaansChiMalaySwahiliIrishWelshChiberaruziIcelandicMacedonianYiddishArmenianAzerbaijaniBasquerechiGeorgianHaitian CreoleUrduBengaliBosnianCebuanoEsperantoGujaratiHausaChiHmongIgboChiJavaneseKannadaKhmerLaoLatinMaoriMarathiMongolianNepaliPunjabiSomaliTamilTeluguYorubaZuluMyanmar (Burma)ChichewaKazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmharicCorsicanFrisianHawaiianKurdish (Kurmanji)KyrgyzKurdishPashitoSamoanScottish GaelicshonaSindhiXhosa
Iko kukanganisa kwaitika, ndapota edza zvakare.
«Pakapfuura Chinyorwa Inotevera Chinyorwa »
Chii chinonzi India Visa Chikumbiro?
Hurumende yeIndia inoda kuti vese vekunze vanotsvaga kupinda muIndia, vaendese Indian Visa Chikumbiro. Maitiro aya ekunyorera maficha anogona kuitwa chero nekushanya chaiko kumumiriri weIndia kana nekuzadzisa iyo India Visa Chikumbiro online pane ino webhusaiti.
Iyo India Visa Chikumbiro ndiko kutanga kwehurongwa hwekutsvaga mhedzisiro yesarudzo yeIndia yeVisa. Indian Visa chisarudzo muakawanda emakesi kesi yakanakira ivo vanyoreri.
Ndiani anofanirwa kuzadzisa India Visa Chikumbiro?
Avo vashanyi vari kuuya kuIndia sevashanyi, kana nekuda kwekutengeserana kana kurapwa vanogona kuendesa uye Indian Visa Chikumbiro online uye kutariswa kwekupinda muIndia. Kupedzisa iyo India Visa Chishandiso pachacho hachisi kungobvumira kupinda muIndia.
Iwo magavhuna ekufambisa anogadzwa neHurumende yeIndia sarudza zvabuda muIndia Visa Chikumbiro zvichienderana neruzivo rwakapihwa nevanonyorera uye cheki yavo yemukati yekutarisa.
Vafambi kuenda kuIndia vachiuya pasi peimwe Visa Type inotsanangurwa pano kuda kuzadza India Visa Chikumbiro.
Indian Visa Chikumbiro online kana eVisa India inowanikwa pasi pemazhinji aya mapoka:
India eMedical Inouya Visa
Ndeapi ruzivo runodiwa muIndia Visa Chikumbiro?
Iyo fomu pachayo yakanyatsojeka uye iri nyore kupedzisa mumaminetsi mashoma. Pane ruzivo runodiwa kubva kune vanonyorera vari pasi pemapato makuru anotevera:
Biographic nhoroondo yemufambi.
Nhoroondo yakaparwa yemhosva.
Zvimwezve zvinodiwa zvinodiwa zvichienderana nemhando ye visa.
Mufananidzo weuso uye pasipoti kopi inobvunzwa mushure mekubhadhara kwaitwa.
Ndinofanira kupedzisa rinhi India Visa Chikumbiro?
Iwe unofanirwa kuzadzisa iyo India Visa Chikumbiro mazuva anenge mana usati wapinda muIndia. Visa yeIndia inogona kutora mazuva matatu kusvika mana kuti ubvumirwe, saka zvakanakira kuisa mana ebhizinesi zuva usati wapinda muIndia.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti upedze Indian Visa Chikumbiro?
India Visa Chikumbiro chinotora maminetsi mashanu kuti apedze usati waita muripo wepamhepo. Mushure mekubhadhara kwapera, zvichienderana nerudzi rwemunhu anonyorera uye chinangwa cheKushanya, anenge achikumbira angakumbirwa rumwe ruzivo.
Ruzivo rwakawedzerwa rwunopedziswawo mumaminitsi matatu. Kana paine zvanetswa mukupedzisa pamhepo kushanda pamhepo, unogona kubata Dhipatimendi Rekubatsira uye reVatengi Rekutsigira iri webhusaiti iyi uchishandisa Taura nesu kubatana.
Ndeapi pre-requisites kana zvinodiwa kuti upedze India Visa Chikumbiro online?
a) Passport kana nyika inodiwa:
Iwe unofanirwa kuve weimwe ye nyika dzakakodzera izvo zvinobvumidzwa neHurumende yeIndia kuva eVisa India yakakodzera.
b) Chinangwa chinodiwa:
Imwe pre-inodikanwa yekuzadzisa iyo India Visa Chikumbiro online inouya kune imwe yeanotevera zvinangwa:
Kushanyira zvinangwa zveTishanyi, Kusangana Mhuri uye Shamwari, Yoga Chirongwa, Kuona Kuona, Pfupi Yekuzvipira basa.
Kuuya kweBhizinesi neKufambisa Rwendo, Kutengesa uye Kutenga Kwezvakanaka kana masevhisi, Kuitisa Matambiro, Kuenda Kumisangano, Kutengeserana Fairs, Seminars, Musangano kana chero chero maindasitiri, Mabasa ekutengesa.
Kurapwa kwekurapa wega kana kuita seMutambi wechiremba kune munhu ari kurapwa.
c) Mamwe maratidziro
Zvimwe zvinodiwa usati wapedza India Visa Chikumbiro online ndeizvi:
Pasipoti iyo inoshanda kwemwedzi mitanhatu panguva yekupinda muIndia.
Pasipoti ine mapeji maviri asina chinhu kuitira kuti mukuru wekuenda nekune dzimwe nyika anogona kuitsikisa paairport. Ziva, kuti iyo India Visa yaunza mushure mekuzadza India Visa Chikumbiro pamhepo hazvidi kuti iwe ushanyire India mumiriri kuti unfixation yeVisa chitambi. Mapeji maviri asina chinhu anodikanwa panhandare yekupinda uye kubuda sitampu pane yako pasipoti.
Ichokwadi email id.
Nzira yekubhadhara senge cheki, kiredhiti kadhi, kadhi rechikwereti kana PayPal.
Ini ndinogona kufaira boka kana mhuri India Visa Chikumbiro?
India Visa Chikumbiro, zvisinei nemamiriro ekupedzisa, angave ari paInternet kana kuIndia Embassy, ​​inoda kuzadzikiswa yemunhu mumwe nemumwe zvakasiyana zvisinei nezera ravo. Iko hakuna boka reIndia Visa Chikumbiro fomu inowanikwa online kana isina nzira nzira.
Ndokumbira kuti uone kuti iwe unofanirwa kunyorera munhu wega wega pasipoti yake, nokudaro mwana akazvarwa haagone kufamba mupasipoti yemubereki kana muchengeti wake.
Chii chinoitika kana wapedza Indian Visa Chikumbiro?
Kana iyo Indian Visa Chikumbiro yaendeswa iko kunoitwa mukugadziriswa kuHurumende yeIndia nzvimbo. Vafambi vanogona kubvunzwa mimwe mibvunzo kana kujekeswa zvine chekuita nerwendo rwavo kana vanogona kupihwa Indian Visa pasina kumwe kujekeserwa.
Mimwe yemubvunzo yaowanzo bvunzwa inoenderana nechinangwa cherwendo, nzvimbo yekugara, hotera kana chirevo muIndia.
Ndeupi musiyano uripo pakati peIndia Visa Online Chikumbiro uye Pepa Chikumbiro?
Hapana mutsauko pakati penzira mbiri kunze kwekusiyana kudiki.
Indian Visa Chikumbiro Online ndeyokugara zvakakwana kwemazuva zana nemakumi mapfumbamwe.
Indian Visa Chikumbiro Pamhepo chakatumirwa kuTravelist Visa ndeye makore anopfuura mashanu.
Indian Visa Chikumbiro Pamhepo chinotenderwa kune zvinotevera zvinangwa:
Rwendo rwako ndeyekuvaraidza.
Rwendo rwako nderekuona-kuona.
Iwe urikuuya kuzosangana nevemhuri nehama.
Uri kushanyira India kuti usangane neshamwari.
Uri kuenda kuYoga Chirongwa / e.
Uri kuenda kuiri kosi isingapfuure 6 mwedzi mukuita uye kosi isingapi dhigirii kana diploma chitupa.
Iwe urikuuya basa rekuzvipira kweanosvika mwedzi 1 mukureba.
Chinangwa chekushanya kwako kumisikidza indasitiri yakaoma.
Iwe uri kuuya kuzotanga, kureverera, kupedzisa kana kuenderera mberi nebhizinesi rekuita.
Kushanya kwako ndekwekutengesa chinhu kana sevhisi kana chigadzirwa muIndia.
Yako inoda chigadzirwa kana sevhisi kubva kuIndia uye kutarisira kutenga kana kutenga kana kutenga chimwe chinhu kubva kuIndia.
Iwe unoda kuita basa rekutengesa.
Iwe unofanirwa kuhaya vashandi kana manpower anobva kuIndia.
Iwe urikupinda pakuratidzira kana fairs yekutengeserana, mabhizinesi ekutengesa, masamanisi ebhizinesi kana musangano webhizinesi.
Iwe uri kuita senyanzvi kana nyanzvi yepurojekiti nyowani kana inoenderera kuIndia.
Iwe unoda kuitisa kushanya kuIndia.
Iwe une lexure / s yekuendesa mukushanya kwako.
Iwe urikuuya Kurapwa kwekurapa kana kuperekedza murwere ari kuuya kuzorapwa.
Kana chinangwa cherwendo rwako chisiri chimwe chezvataurwa pamusoro apa iwe unofanirwa kuisa pepa rakavakirwa, rakajairwa Indian Visa Chikumbiro iro rinonetesa uye kwenguva refu maitiro.
Ndezvipi zvakanakira kupedzisa Indian Visa Chikumbiro online?
Zvakanakira An Indian Visa Chikumbiro pamhepo zvinotevera:
Visa inotumirwa neemail pamagetsi, saka izita eVisa (yemagetsi Visa).
Kuwedzera kujekeswa uye mibvunzo zvinobvunzwa neemail uye hazvitsvage kubvunzurudzwa kuIndia Embassy kana Consforti.
Kugadziriswa kunokurumidza uye kunopedzwa muzviitiko zvakawanda mumaawa makumi manomwe nemaviri.
Iwe unofanirwa here kushanyira Ambassia yeIndia kusvika wapedza India Visa Chikumbiro online?
Kwete, iwe haudanirwe kushanyira India Embassy kana Indian High Commission kana wapedza Indian Visa Chikumbiro online.
Iyo elektroniki Indian Visa iyo yauchapihwa kwauri, ichave yakanyorwa mune yekomputa system. Unodikanwa kuti uchengete kopi yakapfava pafoni yako kana kuti kana bhatiri rerunhare rikafa, zvakakosha kuti uchengete pepa rekuprinta rakadhindwa eIndia yako Visa yemagetsi kana eVisa India. Iwe unogona kuenda kune airport mushure mekutambira eIndia eVisa.
Mari yekubhadhara ingaitirwe sei kuIndia Visa Chikumbiro pamhepo?
Kune zvinopfuura 133 mari dzinogamuchirwa pane ino webhusaiti. Unogona kubhadhara online, kana nekutarisa kune dzimwe nyika, neDebit Card, Kadhi rechikwereti kana PayPal.
UNOGONA KUTI uite chikumbiro cheIndia Visa Chikumbiro online?
Pane mamiriro ezvinhu apo iwe unofanirwa pasi pezvose zviri zviviri maitiro asi angave usiri kupihwa eVisa India kana Indian Online vhiza kana pazasi zvinoshanda kwauri.
Iwe uri kunyorera pasi pe diplomatic pasipoti panzvimbo yepasipoti.
Iwe uri kutarisira kuita zviitiko zvevatori venhau kana kuita mafirimu muIndia.
Uri kuuya kuzoparidza kana basa remamishinari.
Iwe uri kuuya kuzoshanya kwenguva refu pamusoro pemazuva zana nemakumi masere.
Kana chimwe chezvakamboshanda chinoshanda kwauri saka unofanirwa kunyorera pepa / vhiza yeVhiza yeIndia nekushanyira iyo iri pedyo neIndia Embassy / Consulate kana Indian High Commission.
Ndeapi magumo eIndia Visa Chikumbiro pamhepo?
Kana iwe uchikodzera eVisa India uye wakasarudza kuzadza Indian Visa Chikumbiro Online, ipapo iwe unofanirwa kuziva nezve izvo zvausingakwanisi.
Indian Visa iyo ichaunzwa kwauri iwe kana wapedza India Visa Chikumbiro Online kana eVisa India Chikumbiro inongowanikwa chete matatu durations kune Vafambi, 30 Zuva, 1 Year uye makore mashanu.
India Visa Chikumbiro online chakapedzwa chinokupa iwe Bhizinesi reVisa reIndia iro riri kwenguva imwechete yegore 1 uye yakawanda yekupinda.
Medical Visa inowanikwa kuburikidza neIndia Visa Chikumbiro Pamhepo kana eVisa India inowanikwa kwemazuva makumi matanhatu nekuda kwekurapa. Inotendera zvitatu kupinda India.
India Visa Chikumbiro Pamhepo chinokupa iyo eVisa yeIndia, ichabvumidzwa seti yakatemwa yemachiteshi ekupinda nemhepo, 28 Ndege uye makumi mashanu mashanu echikepe. Kana iwe uri kuronga kushanyira India nenzira, ipapo haufanirwe kunyorera vhiza kuenda kuIndia uchishandisa iyi webhusaiti uchishandisa iyo India Visa Kuteedzera nzira online.
eVisa India yakawanikwa nekuzadzisa Indian Visa Chikumbiro online haina kukodzera kushanyira mauto cantylvania nzvimbo. Iwe unofanirwa kunyorera kune Inochengetedzwa Nzvimbo yeMvumo uye / kana Yakatenderedzwa Nzvimbo yeMvumo.
Electronic Visa yeIndia ndiyo nzira inokurumidza yekuwana yekupinda muIndia kana iwe uri kuronga kushanya ne cruise kana mhepo. Kana iwe uri weimwe ye180 nyika dziri eVisa India yakakodzera uye yakataurwa chinangwa mechi sekutsanangura pamusoro, iyo iwe unogona kunyorera yeIndia Visa pamhepo pane ino webhusaiti pano.
Ita shuwa kuti waongorora kukodzera kwako India eVisa.
United States vagari, Zvizvarwa zveUnited Kingdom, Canadian vagari uye Zvizvarwa zveFrance anogona nyorera online yeIndia eVisa.
Ndokumbira utorezve India Visa mazuva 4-7 usati watiza.
India eVisa Chikumbiro
Ruzivo rwako pachako rwakachengetedzwa zvakachengetedzwa neSecurity Seketi Layer (SSL) software
eVISA INDIA KUSVIRA
eVISA ELIGIBILE NYAYA
eMEDICAL PAKUTANGA VISA
eVISA VISITOR DZIDZO
eVISA MUFANANIDZO MAHARA
VISA PASSPORT KUFUNA
ANOGONESWA PORTS DZESVONDO
ANOGONESWA PORTS EEUSA
KUSAZIVA VISA MESE
KURUMIDZA INDIAN VISA
ZANO RINOKOSHESA VISA KUSVANYA
BHUKU VISA VAENDA
eVISA KUSVIRA APA
GADZIRA INDIA eVISA
KUSVIRA KUNYANYA EVISA KUSVIRA USA
VANAMWARI NYIKA YAKO KERALA
ZVINOKOSHA ZVOKUDYA ZVEVANHU
UNOFANIRA ONA UNESCO HITSITI SITES
MUTAMBI WEMUNHU WEINDIAN ane mukurumbira
ZVINOTAURWA NEINDIAN SWEETS
KUONESA TAJ MAHAL
DZIVANYA KUNOGADZIRA KUGoA
MUSSOORIE Uye ARUNACHAL
KUPARIDZA MU MUSSOORIE
ZVINOGONESESA TAMIL NADU
RANN YEKUTCH RUCHERE RUTSANGO
ANDAMAN & NICOBAR ZVITSUWA
ZVINOTAURWA NEVASHANYI KUMEGHALAYA
UNOFANIRA KUONA SOUTH INDIA
Disclaimer: Indian Visa yakapihwa neiyi webhusaiti webhusaiti inoshandiswa zvakananga kuHurumende yeIndia Immigration Hofisi. Hurumende yeIndia haina kugadza www.indiavisa-online.org zvakananga, zvisina kunanga kana chete. Mari yehunyanzvi inobhadhariswa masevhisi edu uye Hurumende Visa Levy kune avo vanonyorera pawebhusaiti ino.